people Nepal » आजको राशिफल : असोज २५ गते / अक्टोबर ११ तारिख बुधबार आजको राशिफल : असोज २५ गते / अक्टोबर ११ तारिख बुधबार – people Nepal
आजको राशिफल : असोज २५ गते / अक्टोबर ११ तारिख बुधबार
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल आश्विन २५ गते बुधबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर ११ तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथी १२:३५ बजे सम्म पश्चात सप्तमी तिथी चन्दमा मिथुन राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु, गैरआवासीय नेपाली दिवस
अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । शारीरिक आलस्यले कार्य ढिलाई हुन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने छ । कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पधिहरुको बृद्यिहुनाले तपाईलाई सामान्य झन्झट आईपर्ला ।
भोग विलासको क्षेत्रमा समय खर्चनु पर्नेछ । प्रतिश्पर्दि हरु कमजोर रहनेछन् । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट आई पर्ला । तपाईको कार्यले अन्य ब्यक्ति हरुलाई मनग्य लाभ दिलाउने छ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ ।
मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्य सम्पादनमा बिभिन्न समस्याका कारण ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।